प्रदेश नं. २ : मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने – The Public Today
प्रदेश नं. २ : मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने
न्युज कारखाना भदौ १९, २०७७ ८:२२ pm
जनकपुरधाम, भदौ १९ गते : प्रदेश नं २ सरकारले जनकपुरधामको मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने भएकोे छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी)को आज बसेको बैठकले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै अस्पतालका रुपमा मणिपाललाई तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आठै जिल्लामा मुख्यरुपमा पिसिआर सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको बताउनुभयो । वीरगञ्जमा थप पिसिआर र जनशक्तिको माग गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा पिसिआरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो ।